Boky Thermorecetas - boky fahandro ho an'ny Thermomix
Boky fanamboarana ho an'ny Thermomix: ny boky Thermomix rehetra
Tamin'ny Thermorecetas dia nanomana andian- boky izay hampianatra anao ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'ny Thermomix anao. Amin'izy rehetra ireo dia hahita fomba fahandro manokana handrahoana lovia matsiro be ianao ary hahafahanao manaitra ny fianakavianao sy ny namanao. Hanohy hiasa amin'ny boky vaovao izahay, Maharaha vaovao!
- Resipeo 2: Resipeo latsaky ny 30 ′
Resipeo vaovao 40 miaraka amina lovia lehibe matsiro, lafiny mahagaga ary tsindrin-tsakafo mahafinaritra be dia be ao anatin'ny 30 minitra ary mety ho an'ny mpianakavy rehetra. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Resipeo tsindrin-tsakafo 40 miaraka amin'ny Thermomix
Lovia mofomamy mahafinaritra 40 miaraka amin'ny mofomamy, muffins ary bundtcakes, ary koa crostatas, crumbles, cookies ary mofomamy puffies ary karazana mofomamy sy crepe. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Bokin-tsakafo mahasalama miaraka amin'ny Thermomix
Resipeo 100 ho an'ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja, izay 40 no mahomby indrindra ao amin'ny bilaogy ary ny 60 ambiny kosa dia mbola tsy navoaka. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Boky momba ny resipeo ho an'ny Thermomix
Afaka mahita ao amin'ity boky ity ianao Resipeo 100 hiomanana amin'ny Thermomix anao amin'izay hahagaga anao ny namanao sy ny fianakavianao. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Express resipe miaraka amin'ny Thermomix
Natao ho an'ireo olona rehetra tsy manam-potoana sy tsy te hilavo lefona sakafo feno, salama ary voalanjalanja. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Sakafo manokana miaraka amin'ny Thermomix
Resipeo 32 ho an'ny olona miaraka aminy tsy fahazakana sakafo na iza no aleony manaraka sakafo manokana toy ny vegan na vegetarian. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Boky firaisan-kina amin'ny bilaogy sy fandrahoan-tsakafo
Resipeo 39 ho an'ny Ampio ny HelpAge International Foundation hamatsy vola ny tetikasan'izy ireo any Etiopia ary hiady amin'ny hanoanana sy ny fahantrana. [Fampahalalana misimisy kokoa]
- Recipe Noely ho an'ny Thermomix
ny fomba fahandro Krismasy tsara indrindra ho an'ny Thermomix no niseho tao amin'ny bilaogy nangonina tao anaty ebook azo sintomina maimaim-poana tanteraka.
Azonao atao ny misintona ny boky momba ny Krismasy malalaka tanteraka amin'ny fanampiana fotsiny anay hizara izany amin'ny media sosialy.
Raha mitady bebe kokoa ianao Boky Thermomix Amin'ity rohy ity dia ho hitanao ny ebooks rehetra, boky amin'ny endrika ara-batana ary ny boky ofisialin'ny Thermomix navoakan'i Vorwerk.